Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Askari Jabuutiyaan ah oo dad shacab ah ku rasaaseeyay Baladweyne iyo Qasaaro ka dhashay
August 18 2017 15:37:28
Askari Jabuutiyaan ah oo dad shacab ah ku rasaaseeyay Baladweyne iyo Qasaaro ka dhashay
Askari katirsan ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda dalka Jabuuti ayaa maanta labo qof oo shacab ah waxa uu ku dhaawacay Xaafada Kooshin Magaalada Baladweyne .
Goobjoogayaal ku sugnaa halka ay arintan ka dhacday ayaa ku waramay in Askariga dadka dhaawacay ay murmeen haweeney lacag deyn ah ku laheed kadibna uu rasaas ku furay haweeneyda ay murmeen iyo dad kale oo goobta ka ag dhawaa.
Inta la xaqiijiyay labo qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacantay rasaasta uu furay askarigan katirsan Ciidamada Jabuuti , waxaana dadka dhaawacmay loola cararay isbitaalka weyn ee magaalada Baladweyne.
Ciidamo katrsan dowlada iyo kuwa AMISOM ayaa xiray askariga falkan dhaawaca ah u geestay dadka shacabka ah, waxaan askariga lagu xiray sida aan Wararka ku heleyno saldhiga ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin magaalada Baladweyne.
Ciidamada AMISOM ee ku sugan qaar kamid ah gobolada dalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyaa in ay waxyeelo u geestaan dadka shacabka ah ee ku sugan goobaha ay joogaan , mana jirto tilaabo muuqata oo laga qaado askarta AMISOM ee shacabka dhibaateeya.
· mamaan on May 02 2016 ·